ဘ၀ခရီး၏ ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှု မှတ်တိုင်လေးတစ်ခု | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
Filed under: Lin Let Kyal Sin, Wedding
ဒီကဗျာလေးကို ဘာရယ်မဟုတ် စိတ်ထဲရှိသလို ချရေးလိုက်ရင်း လတ်တလော အကြိုက်ဆုံးသီချင်း A Moment Like This ကို ခပ်တိုးတိုးလေး သီဆိုနေမိတယ် .. ။ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဘလော့ခ်လာသူများအားလုံးနှင့် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ 🙂
Lyrics | Kelly Clarkson lyrics – A Moment Like This lyrics
Comment by ဆောင်းယွန်းလ November 25, 2008 @ 4:56 am
Comment by NBWI SAM November 25, 2008 @ 5:43 am
ညီမလေး လင်းလက် စိတ်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ ဘ၀ခရီးကို နားလည်မှုများနဲ့ ဖန်တီး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေ။
Comment by Moe Cho Thinn November 25, 2008 @ 5:44 am
Comment by shin November 25, 2008 @ 7:49 am
Congratulation! to you!
Comment by shin November 25, 2008 @ 7:50 am
အားကျလိုက်တာ။ 🙂 ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို ရှေ့ဆက်ရမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလည်းနော်။
Comment by ဆုငယ်. November 25, 2008 @ 9:12 am
Congratulation par Nyi Ma Thay Thay Lay!
Sar Myarr Sax Yay par!
Comment by A'karikz Yannaing November 25, 2008 @ 9:42 am
ညီမလေး လင်းလက် စိတ်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာအောင်မြင်တဲ့ ဘ၀လေးကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ 🙂
Comment by May Moe November 25, 2008 @ 9:54 am
မိုး နဲ့ မြေ အပြိုင်
Comment by sonata-cantata November 25, 2008 @ 10:49 am
Comment by sonata-cantata November 25, 2008 @ 10:51 am
ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွားဖြစ်တဲ့ထိ ထာဝရပျော်ရွှင်ခိုင်မြဲပါစေ..
ဆုတောင်းပေးချင်တယ်။ စကားလုံးလှလှလေးက ရှာမတတ်တော့ဘူး 🙂
Comment by sin dan lar November 25, 2008 @ 12:33 pm
ဟိုလေ ခေတ်မှီသူတိုင်း ကျောပိုးကြသည်တဲ့။ သတို့သားက သတို့သမီး ကျောပိုးတဲ့ပုံကော ရိုက်ဖြစ်သေးလား…. 😀
Comment by တက်တူ November 25, 2008 @ 2:30 pm
May you2live happily.
Comment by phyozin November 25, 2008 @ 10:18 pm
Comment by phyozin November 25, 2008 @ 10:19 pm
ဝမ်းသာစရာပဲ မလင်းလက်ရေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ 🙂
Comment by Winkabar November 26, 2008 @ 1:35 am
ရေးထားတာလေးတွေဖတ်ရင်း စာရေးသူအပျော်က ရင်ဘတ်ထဲကူးစက်လာတယ်။ ကြည်နူးမိတယ်။ 🙂
Comment by မစ်(စ်)သွန်းသွန်း November 26, 2008 @ 3:04 am
Happy Marriage and Happy Honey Moon ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ 🙂
Comment by A Linn Nyi November 26, 2008 @ 4:19 am
sister…. waiting for new post naw…
Comment by Yarma November 27, 2008 @ 9:44 am
sister waiting for new post naw
Comment by Anonymous November 27, 2008 @ 9:45 am
ညီမလေးရေ… Congratulations… ပျော်ရွှင်ပါစေ။ 🙂
Comment by s0wha1 November 27, 2008 @ 1:07 pm
သတိထားပီးလည်း ကြွား ဦး
Comment by pyithu November 28, 2008 @ 3:16 am
??ျာ်ရွှင??ကည်နူးဖ?ယ် ?ဝ?တွ ပို?်ဆိုင?န?ငိ်?ါစေ? ???်?န်ရ??းစားစွ? အေ???မြ?်?ှုမ?ား ?ပါစေ
Comment by Anonymous November 28, 2008 @ 3:49 am
အားလုံး အလည်လာရောက် ပျော်ရွှင်မှု မျှဝေခံစားပေးသူများ ကျေးဇူးပါရှင်။
ကိုတက်တူ >>> ဓာတ်ပုံဆရာက ချီခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မက ကြောက်နေလို့ ခဏလေးပဲ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် 😛 ။
pyithu >> မတူတာကို တူအောင် မပြောမိပါစေနဲ့ရှင်။ ကျွန်မမှာ ကြွားစရာ ဘာမှမရှိ။ လက်ရှိအနေအထား ပျော်ရွှင်မှုတွေကို အနည်းငယ်လောက် မျှဝေပေးတာလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ မကျေနပ်ရင် Oriental Hotel မှာ ၂၁ရက်နေ့ တစ်နေကုန် လာထိုင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ရင်း စုံထောက်များအား ကျွန်မအဖြစ်မှန်များကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်:)
Comment by လင်းလက်ကြယ်စင် November 28, 2008 @ 3:49 am
တလောက လုံးက အကောင်းဆုံး ဆုတောင်းတွေ အားလုံးနဲ့ ဆုတောင်း ပေးလိုက် တယ်နော်.. ၂ယောက် တဘ၀လေး အမြဲ အေးချမ်း ပျော်ရွှင်နိုင် ပါစေ
Comment by ခွန်မြလှိုင် November 28, 2008 @ 4:22 am
ဟိုလေ ခေတ်မှီသူတိုင်း ကျောပိုးကြသည်တဲ့။ သတို့သားက သတို့သမီး ကျောပိုးတဲ့ပုံကော ရိုက်ဖြစ်သေးလား…
ဓာတ်ပုံဆရာက ချီခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မက ကြောက်နေလို့ ခဏလေးပဲ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် 😛 ။
Comment by Anonymous November 28, 2008 @ 5:29 am
မကွယ်မဝှက်ပြောရရင် အားကျတယ်ဟေ့.. အဟေးဟေး..
သတို့သမီးအရံလေးများလိုက်လုပ်လို့မရဘူးလား.. ဒါပေမဲ့ သတို့သားအရံက ချောမှနော်…
မင်္ဂလာမှတ်တမ်းလာတင်ပေးရမလား.. ဒီက ဒါရိုက်တာရူးနော်..
စကာင်္ပူက ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေတွက်ရော.. သီးသန့်အစီအစဉ်လေးများရှိဝူးလား.. ဟဲ.. ဟဲ (စတာ)..
ဘာဆုတောင်းပေးရမှန်းမသိဘူး.. လိုချင်တဲ့ဆု အားလုံးပြည့်ပါစေနော်…
Comment by mabaydar November 28, 2008 @ 8:11 am
Comment by M.Y. November 28, 2008 @ 12:12 pm
ညီမ လင်းလက်ရေ ချစ်သူနှစ်ဦး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ ဘ၀တလျှောက်လုံး လက်တွဲနိုင်ကြပါစေ။
Comment by pandora November 28, 2008 @ 12:21 pm
ညီမလေးရေ…အမှတ်တရတွေ တစ်စုတစ်ဝေးနဲ့ တစ်သက်တာအတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ပြည့်စုံမှုတွေ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်… 🙂
Comment by GreenGirl November 28, 2008 @ 1:59 pm
ဟုတ်တယ်ဗျ အားကျလိုက်တာ … 🙂 မလင်းလက် တို့ ပျော်ရွှင်နေတာကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ပါ အပျော်တွေကူးစက်လာတယ်ဗျ။ အဝေးရောက် သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ကော အစီစဉ်ရှိဘူးလား 🙂
Comment by ဗမာပြည်သား November 28, 2008 @ 5:47 pm
ဗမာပြည်သား.. အဝေးရောက်အတွက်မရှိဘူး.. ဟီး.. လာချင်ရင် စကာင်္ပူလာခဲ့.. ငှဲ.. ငှဲ.. စလုံးကဘလော့ဂါတွေအတွက်ပဲ ရှိတယ်..
Comment by mabaydar November 29, 2008 @ 10:23 am
congrat…bhappy wif the ones u luv! 🙂
Comment by kwikwi December 1, 2008 @ 12:48 pm
Comment by Ko Paw December 2, 2008 @ 9:09 am
Comment by Ko Paw December 2, 2008 @ 9:11 am
A heartful congrat to လင်းလက်!! 🙂
Comment by သဉ္ဇာ - Thinzar December 3, 2008 @ 4:50 am
လင်းလက်ရေ ဘ၀လက်တွဲဖေါ်နဲ့ အအေးတူ ပူအမျှ ဘ၀တလျှောက်လုံး ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပေါင်းသင်းရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Comment by Nge Naing December 3, 2008 @ 9:20 am
Comment by Mr.Guiter December 3, 2008 @ 2:23 pm
သမီး လင်းလက်ကလေးနဲ့ ချစ်သောကိုကိုတို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့အတ်ိနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပါစေ..။
Comment by မေငြိမ်း December 3, 2008 @ 4:21 pm
Comment by ကိုတေ December 4, 2008 @ 12:13 am
အားကျတယ်ဗျာ. ကျွန်တော့်ကားကတော့ အခုမှ စက်ရုံမှာ ဘော်ဒီထုနေတုန်းပဲ. အသည်းကွဲရုံတင်မကဘူး. ဘော်ဒီပါကွဲသွားလို့လေ. 🙂
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အိမ်ထောင်လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ရိုးမြေကျ ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာ ပေါင်းသင်းနိုင်၊ ပါရမီဖြည့်နိုင်ကြပါစေဗျားးးး
Comment by Yan December 4, 2008 @ 7:14 am
ညီမလေးတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေး-)
Comment by ကောင်းကင်ကို December 4, 2008 @ 9:54 am
သာယာချမ်းမြေ့သော အိမ်ထောင်ရေးလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ …
ဘ၀ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်အောင်မြင်မှုများစွာ … စိတ်ချမ်းသာမှုများစွာ … ဆထက်တပိုး တိုးပြီးရရှိကြပါစေလို့ … ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ် …
Comment by Goun Goun December 4, 2008 @ 5:08 pm
wat time is ur wedding? nvr invite me?
buffet or course dinner? i wanna eat.. 😀
Comment by Anonymous December 4, 2008 @ 7:08 pm
မလင်းလက်ရေ .. ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲပြီး ပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖွယ် ဘ၀လေးတခု တည်ဆောက်ရင်း အများအကျိုးပြု အလုပ်လေးတွေ ဆထက်တံပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ … လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Comment by ဗေဒါရီ December 5, 2008 @ 12:45 am
Comment by ၀ါဝါခိုင်မင်း December 5, 2008 @ 7:29 am
အခုမှပဲ ရောက်လာရကောင်းလားဆိုပြီး စိတ်တော့ မဆိုးနဲ့ကွ။ အကို အခုရက်ပိုင်းတွေ ဘယ်မှာမှကို စာလိုက်မဖတ်ဖြစ်သလို ဖြစ်နေတော့ ညီမ မင်္ဂလာ အကြိုကိုလဲ မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်မင်ရတဲ့ ညီမတယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ကြားရတာ မင်္ဂလာတပါးပဲမို့ ငါ့ညီမတယောက် ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူ ဘ၀တလျှောက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သာယာတဲ့ အသိုက်အမြုံတခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ အကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Comment by ကလိုစေးထူး December 5, 2008 @ 6:15 pm
သာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်ပါစေဗျာ။ ဘ၀လမ်းခရီးမှာ ချစ်သူနှစ်ဦး ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့လက်တွေခိုင်ခိုင်မြဲလို့ရဲရဲကြီး လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျာ။
Comment by ဇင်ယော် December 8, 2008 @ 6:53 pm
I think you wanna boast abt ur wedding n honeymoon…maybcuz of ur age..neway i wish u guys gotahappy life
Comment by Ye December 27, 2008 @ 7:09 am